Tilmaamaha iyo Baarkinka | BGA
Boston Green Academy waxaa si fudud looga heli karaa habab fara badan (oo ay ku jiraan gaadiidka dadweynaha, kaas oo ah wadada ugu cagaaran ee lagu tago!).
Khadka Cagaaran ee MBTA
Qadka Tareenka: Kaga qaad tareenka istaaga Warren Street, u kac dhanka Warren Street oo ku soco laba baloog. BGA waxay noqon doontaa wadada ku taal midigtaada geeska Warren St. iyo Cambridge St. Jadwallada gaarka ah ee tareenka, fadlan la tasho shabakadda MBTA .
Khadad badan oo basas ah oo badan ayaa u adeega iskuuladayada Dustin Street Stop ee Cambridge Street, oo ku taal banaanka dhismahayaga:
57 iyo 57A waxaa laga keenay Kenmore. Si toos ah u jooji dugsiga hortiisa.
66 bas ayaa ka socda Dudley illaa Brighton Ave, ka dibna qaad 57, oo ku istaaga BGA kuna taal Cambridge St.
501 ama 503 Commuter Express Bas. Labaduba waxay shaqeeyaan kaliya aroortii (6 am ilaa 9 subaxnimo) iyo fiidkii (3:30 pm-7:30 pm). 501 wuxuu ka socdaa / ka socda Isgoyska Magaalada halka 503 uu ku sii socdo / ka socdo Fagaaraha Copley. Basasani waxay qaadanayaan Mass Pike waxayna qaataan qiyaastii 22 daqiiqo.
Jadwalka basaska gaarka ah, fadlan la tasho Websaydhka MBTA .
Meelaha gawaarida la dhigto way xadidan yihiin meelaha baabuurta la dhigto ee BGA. Baarkinka-wadada waxaa laga heli karaa agagaarka dhismaha mana u baahna rukhsad inta lagu jiro meelaha badankood.
Baska loo yaqaan 'But Shuttle Bus' (oo loogu talagalay ardayda)
BPS waxay bixisaa bas bas ah subax subax ilaa BGA oo ka yimaada Ashmont ama Andrew Station. Lambarka baska ee 2018-19 waa B350. Baska ayaa loo qorsheeyay inuu ka baxo Ashmont 6:17 wuxuuna ka tagaa Andrew 6:35. Tani waxay keenaysaa imaatinka BGA qiyaastii 7:15 aroornimo. Qulqulku waa kii ugu horreeyay ee ugu horreeya. Marka ay buuxsamayso way tagi doontaa. Ardayda seegta baska waxay u baahan doonaan inay raadsadaan habab kale oo gaadiid ay ku aadaan dugsiga.